८ माघ, काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका उम्मेदवार छनोटका लागि पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित तीन शीर्ष नेतालाई जिम्मेवारी दिएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आज बसेको प्रदेश इञ्चार्जसहित शीर्ष नेताको बैठकले अध्यक्ष...बाँकी
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सबै खाले सुरक्षा रणनीति अवलम्बन गरिने
८ माघ, काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको सन्दर्भमा बसेको उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठकले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, मर्यादित र व्यवस्थित वातावरणमा सम्पन्न सबै खाले सुरक्षा रणनीति अवलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहको संयोजकत्वमा...बाँकी
८ माघ, काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक रेशम खड्कालाई रु तीन लाख घुस रकमसहित पक्राउ गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेयका अनुसार प्रहरी सहायक निरीक्षक खड्काले...बाँकी
सांसद सिलवाललाई पक्रन नेपाल प्रहरीले जारी ग¥यो ईन्टरपोलमा डिफ्युजन नोटिस
८ माघ, काठमाडौँ । आईजीपी गर्न किर्ते गरेको आरोप लागेका नेपाल प्रहरीका पुर्व डिआईजी तथा ललितपुर १ बाट निर्वाचित सांसद नवराज सिलवालाई खोज्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले डिफ्यूजन नोटिस जारी गरेको छ । नेपाल प्रहरीले सिलवाललाई...बाँकी
वार्षिक कति केजी दाउरा खपत हुन्छ त पशुपतिमा दाहासंस्कारको लागि ?
८ माघ, काठमाडौँ । पशुपति आर्यघाटमा दाहसंस्कार गर्न वार्षिक २० लाख किलोग्रामको हाराहारी दाउरा खपत हुने गरेको छ । मृतकको दाहसंस्कार गर्न दाउरा उपलब्ध गराउँदै आएको द टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपालले दिएको जानकारीअनुसार झण्डै वार्षिक...बाँकी
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मतदाता नामावली प्रकाशन, कुन प्रदेशमा कति मतदाता ?
८ माघ, काठमाडौँ । आसन्न राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सबैभन्दा बढी मतदाता (निर्वाचक मण्डल) प्रदेश नं २ मा र सबैभन्दा कम प्रदेश नं ६ मा रहेका छन् । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा निर्वाचनको कार्यतालिका अनुसार आइतबार...बाँकी
माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सञ्चालन गर्ने विषयमा स्थानीय निकाय अन्योलमा
८ माघ, लहान । नयाँ व्यवस्थाअनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएपछि त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्नेमा सिरहाका अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरु अन्योलतमा परेका छन् । संघीय व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहलाई माध्यमिक तहसम्मका...बाँकी
८ माघ,काठमाडौं । नेकपा एमालेले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा लड्ने उम्मेदवारको टुंगो आज लगाउने भएको छ । आज दिउसो ३ बजे बस्न लागेको एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले सातै प्रदेशमा चुनाव लड्ने २९ जनाको नाम टुगांउने...बाँकी
८ माघ, लहान । बजार स्थापना भएको ५०औँ वर्षको अवसर पारेर सिरहाको गोलबजारमा स्वर्ण महोत्सव आयोजना हुने भएको छ । गोलबजारको आर्थिक तथा भौतिक विकास, धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन र स्थानीय स्तरबाट उत्पादित वस्तुको बजार प्रवद्र्धन गर्ने...बाँकी
८ माघ, चितवन । राजमार्गमा चल्ने ट्रक र टिपरले बढी दुर्घटना गराएपछि जिल्लाको भरतपुरदेखि मकवानपुरको मनहरीसम्म ‘टाइम कार्ड’ लागू गरिएको छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनले लोकमार्गमा अत्यधिक गतिमा चल्ने यस्ता सवारीसाधनबाट दुर्घटना बढी हुने...बाँकी
पेज ३ देखि १,५२० सम्म :« अगाडि१२३४५...१५२०अर्को »